Wadamada ugu wasakhda badan aduunka: sifooyinka iyo cawaaqibka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Inta badan wadamada wasakhaysan adduunka
Jarmal Portillo | 17/05/2022 12:00 | Deegaanka
Wasakhowga caalamku waa dhibaato aad u daran oo u baahan in si aasaasi ah wax looga qabto. Marka aan ka hadlayno wasakhowga ay soo saaraan labada waddan, waxaan inta badan ka hadalnaa wasakhowga hawada. Inkasta oo ay jiraan noocyo kala duwan oo wasakhaysan, wasakhowga hawadu waxay keenaysaa cawaaqib xun adduunka oo dhan, sida kulaylka caalamiga ah iyo isbeddelka cimilada. The inta badan wadamada wasakhaysan adduunka Waa kuwa hawada wasakhaysan ku sii daaya.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wadamada ugu wasakhda badan iyo cawaaqibka ay wasakhowga hawadu u leedahay deegaanka.
1 Wasakhowga hawada
2 Cawaaqibta ugu weyn
3 Dalka ugu wasakhda badan aduunka
4 Inta badan wadamada wasakhaysan ee aduunka
4.2 Sacuudi Carabiya
Arrintani waa arrin aan hadda gaar u ahayn danaha deegaanka. Waxay noqotay qayb ka mid ah nolol maalmeedka qof kasta sannadihii la soo dhaafay. Wasakhowga hawada waa walaac baahsan, xalkeeduna kuma jiro gacanta dawlado ama dalal kale, laakiin qof kastaa wuxuu ku biirin karaa hadhuudh ciid ah si loo joojiyo dhibaatooyinkaas. Caddaynta ugu muuqata ee wasakhowga hawadu waa daruuraha wasakhda ah ee caanka ah ee ku soo urura hareeraha magaalooyinka kuwaas oo waxyeello u leh caafimaadka.
Waxaa jira noocyo kale oo wasakhowga hawada ah oo aan si sahal ah loo ogaan karin ama aan la arki karin, laakiin sidoo kale cawaaqib xun ku leh caafimaadka noolaha iyo hab-nololeedyada. Wasakhowgani waxay u keenayaan kulayl iyo cawaaqib xumo meeraha meeraha. Helitaankayaga sababaha asalka u ah wasakhowga hawada, waxaan aragnaa in kumanaan sano oo nolosha ah ee meerahan, qiiqa sunta ah ayaa la soo saaray.
Suntu waa qayb ka mid ah wareegga nolosha, laakiin waxay ku dhex jirtaa xadka dabiiciga ah. Si kale haddii loo dhigo, wasakhowga si dabiici ah si weyn uma saameynayso isku-dhafka ama qaab-dhismeedka deegaanka sababtoo ah waxay u dhacdaa si kedis ah. Waa qayb ka mid ah meertada mana korodho dhaqdhaqaaqa bani'aadamka awgeed. Sii dayntaas waxa ka mid ah gaasaska ka soo baxaya qaraxyadda foolkaanaha, laakiin saamayntoodu ma ahayn mid joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, imaanshaha Kacaankii Warshadaha ee Aadanaha iyo korodhka korodhka dadweynaha, waxa ina soo food saartay muuqaal caalami ah oo wasakhaysan hawada.
Wasakhowga hawo kasta waxaa loola jeedaa joogitaanka walxaha sunta ah ee ay soo saaraan dhaqdhaqaaqa aadanaha.
Cawaaqibta ugu weyn
Sida aan wada ognahay, cawaaqibka wasakhowga hawadu aad bay u badan yihiin. Midda ugu horreysa uguna degdegsan waa kororka iyo ka sii daridda cudurrada neef-mareenka iyo xididdada dhiigga ee dadka ku nool xarumaha wasakhaysan ee magaalooyinka. Kuwo kale, Ilaha warshadaha u dhow, waxay ku sii daayaan alaabtan sunta ah jawiga. Cudurrada neef-mareenka iyo xididdada dhiigga ayaa si aad ah ugu kordhay dhammaan meelahaas.
Waxaa lagu qiyaasaa in ku dhawaad ​​3% isbitaalada la seexiyo waxaa sababa xanuunada laxiriira oo sii xumaada iyada oo xadiga wasakhaysan ee jawiga. Wadamada ugu wasakhaysan aduunka ayaa ah kuwa ugu badan ee ay gaasaskani ku badan yihiin sidaa awgeedna saamaynta ugu wayn ay ku leedahay caafimaadka
Saamaynta kale ee halista ah ee wasakhowga hawadu waa saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo ee caanka ah. Waa in aynaan ku khaldin saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo lafteeda iyo korodhkeeda. Dhibaatadu maaha in ay jirto saameyn aqalka dhirta lagu koriyo ah (la'aanteed, noloshu ma ahaan lahayd sida aan ognahay), waa in ay kordhinayso saameynta gaasaskan. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay keento wasakhowga hawada waa burburinta hab-nololeedkii deegaanka, hawlo baaxad leh, kor u kaca heerka badda, dhul la'aanta, taranka cayayaanka, dabar-goynta noocyada, IWM
Dalka ugu wasakhda badan aduunka
Waxaan ognahay in sannad kasta in ka badan 36 bilyan oo tan oo kaarboon laba ogsaydh ah lagu sii daayo hawada. Waa gaaska ugu weyn ee aqalka dhirta lagu koriyo oo mas'uul ka ah isbeddelka cimilada. Jidka sii daaya shidaalkan ayaa inta badan sabab u ah wasakhaynta hawlaha aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, kaliya in yar oo ka mid ah wadamada aduunka ugu wasakhaysan ayaa sii daaya inta ugu badan ee gaasaskan. Waxa la odhan karaa waa dalalka ugu wasakhda badan adduunka sannadihii u dambeeyay waa Shiinaha, Maraykanka, Hindiya, Ruushka iyo Japan.
Marka aan ka hadalno CO2 qiiqa, dhab ahaantii waxaan ugu yeernaa gaaska aasaasiga ah, laakiin sidoo kale waxaa loo yaqaannaa mitirka. Markaan hore u ogaanay wax u dhigma CO2 qiiqa, waxaan horeyba u ogaan karnaa raad kaarboonka gobol kasta, in kasta oo macquul ah wasakhowga ay soo saartaa maaha wax walba, mana aha CO2.
Haddii aynaan garanayn, waa in aan ogaano in heerka wasakhda ee hadda jirta aysan dhicin ugu yaraan 3 milyan oo sano oo aadanuhu dhulka. Sidoo kale waa in la xasuusnaado in wakhtigaas dhulku uu ku socday xilli folkaano ah oo aad u firfircoon.
Marka loo eego xogta la hayo, Waxaan ogaanay in Shiinaha uu yahay 30% wadarta guud ee qiiqa qiiqa adduunka, halka Mareykanka uu ka yahay 14%. Aynu falanqeyno sida ay u kala horreeyaan dalalka ugu wasakhaysan adduunka:
Shiinaha, oo leh in ka badan 10.065 milyan oo tan oo ah qiiqa kaarboon dioxide
Maraykanka, 5.416 GtCO2
Hindiya, oo leh 2.654 GtCO2 oo qiiq ah
Ruushka, oo leh 1.711 milyan oo tan oo CO2 ah
Jarmalka, 759 milyan oo tan oo ah CO2
Iran, 720 milyan oo tan oo ah CO2
Kuuriyada Koofureed, 659 milyan oo tan oo ah CO2
Sacuudi Carabiya, 621 MtCO2
Inta badan wadamada wasakhaysan ee aduunka
Bangladesh waxa ay gashay qiimaynta wadamada ugu wasakhaysan aduunka marka loo eego heerka wasakhda sare. Tayada hawadeedu aad bay u hoosaysaa marka loo eego heerarka la oggol yahay. Celcelis ahaan 97,10 walxood oo wasakhaysan ayaa la gaarey. Lacagtan waxaa sabab u ah qayb ahaan in ka badan 166 milyan oo qof oo ku nool Bangladesh ayaa mas'uul ka ah qiiqa aadka u badan. Waa sanadihii ugu dambeeyay markii warshadaha dalka uu aad u korayay. Waxa jira warshado badan, gaar ahaan kuwa dunta, kuwaas oo soo saara xaddi badan oo gaaska aqalka lagu sii daayo.
Isha ugu weyn ee dhaqaalaha Sacuudi Carabiya waa soo saarista saliidda. Tani waa il dhaqaale oo aad u weyn waxayna noqotay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu daran. Waa soo saarista shidaalka ka kaliya ma soo saaro faa'iidooyinka dhaqaale, laakiin sidoo kale waxay sii daayaan xaddi badan oo ah gaas wasakh ah. qiiqa shidaalka Waxay aad u sun badan yihiin oo waxyeello u geysanayaan caafimaadka.
Hindiya sidoo kale waxay gashay darajooyinka wadamada ugu wasakhda badan aduunka ee leh kobaca warshaduhu. Ma aha oo kaliya inay ka bataan warshadaha, laakiin sidoo kale waxay si khaldan u isticmaashaa bacriminta kiimikada. Isticmaalka khaldan ee bacriminta ayaa wasakheeyey dhammaan dhulalka barwaaqada ah iyo biyo mareennada kaydiya biyaha.
Waxa la odhan karaa Shiinuhu waxa uu ka mid yahay dalalka hormoodka ka ah dhaqaalaha adduunka. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale ka mid tahay dalalka ugu wasakhaysan adduunka. Waxay ahayd iyada oo soo bandhigtay wacyigelin cusub iyo siyaasado hawlgelin oo loogu talagalay tallaabooyinka looga hortagayo laguna xakameynayo wasakhowga deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, Magaalooyinka waaweyn waxay leeyihiin lakabka wasakhowga hawada oo aad u qaro weyn oo aad si dhib leh u arki karto qorraxda. Sii daynta kaarboon laba ogsaydh-dhismeed ee Shiinaha ayaa sii laban laabta ta dalalka kale ee waaweyn sida Maraykanka.
Marka aad ka fikirto dalka ugu wasakhsan aduunka, waxa ay u badan tahay in aanad ka fikirin dalkan. Sidaa darteed, sida dalalka kale sida Hindiya iyo Sacuudi Carabiya, warshadaynta ee bilawga waaweyn ayaa si degdeg ah u fidaya. Horumarintan warshaduhu waxay keenaysaa qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee xad-dhaafka ah. Masar waxa laga yaabaa inay gaadhay heerar wasakhaysan, wadar ahaan 20 jeer ka sarreeya inta la ogolyahay.
Brazil waxa ay ka mid tahay wadamada soo koraya ee dhaqaalahoodu wanaagsan yahay. Nasiib darro, horumarkan dhaqaale wuxuu la xiriiraa wacyiga hoose ee daryeelka deegaanka. Heerkan hoose ee feejignaanta waxay ka dhigan tahay in sidoo kale ay yar tahay waxqabadka dawladdu. Waxaas oo dhami waxay ku kordhinayaan xaalufka baaxadda leh ee uu ku dhacay mid ka mid ah sambabada ugu muhiimsan meeraha, Amazon. Kaliya maaha inay kordhiso xaddiga gaasta wasakhaysan, laakiin sidoo kale waxay hoos u dhigtaa nuugista kaarboon laba ogsaydh ee dhirta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto dalalka ugu wasakhda badan adduunka iyo kuwa ugu wasakhsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Inta badan wadamada wasakhaysan adduunka
Biyofertilizers-ka lidka ku ah xumaanta ciidda